Kaddib guuldarradii xalay ka soo gaartay Leicester City Frank Lampard oo weerar ku qaaday ciyaartoyda kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 20 Jan 2021. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaan ku qancin waxqabadka ciyaartoydiisa intii lagu guda jiray kulamadii la soo dhaafay, taas oo ku kaliftay inuu ku dhaleeceeyo saxaafada horteeda, kaddib guuldaradii ka soo gaartay Leicester City.
Leicester City ayaa garoonkeeda King Power guul kaga gaartay kooxda Chelsea, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League ee dalka England.
Ciyaarta kaddib tababare Frank Lampard ayaa u sheegay saxaafada:
“Waxaa jira ciyaartoy aan si fiican u ciyaareynin, tani waa run, kooxda haatan malahan isla tayada kooxdii horey ugu guuleysatay horyaalka ee Chelsea.”
“Ciyaartoyda ma qaban shaqooyinkoodii ciyaarta, waxay sameeyeen qaladaad shaqsiyadeed oo cad, waxaan ka daalay, waxyaabaha loo baahan yahay in loo sheego waa in sheegaa, ciyaartoyda wey ogyihiin inay kala kulmeen guuldarro kooxdii fiicneyd intii ay ciyaarta socotay.”
“Chelsea waa koox aan diyaar u ahayn in ay u tartanto horyaalka ingiriiska, waa inaad ilowdaa wixii hore oo aad ku noolaataa xaqiiqda, ma nihin kooxdii ku guulaysan jirtay horyaalnimada una tartami jirtay sanad walba.”